Marinka Rafax oo loo furey Xujeyda Falastiiniyiinta – Radio Muqdisho
Marinka Rafax oo loo furey Xujeyda Falastiiniyiinta
Dadka socotada ah ee ka imaanaya Masar, isla markaana ku jeeda Marinka Gaza ,ayaa maanta lagu wadaa in loo furo xadka,sida ay shaaciyeen mas’uuliyiinta xadka kala qeybiya Falastiin iyo Masar .
Xadka Rafax ee dhinaca Masar waa daaqadda kaliya ee u furan dadka reer Falastiin ee ku hoos nool xayiraadda ama gumaysiga Israel, halka lix albaab oo kale ay gacanta ku hayaan ciidamada Yuhuudda.
Hadal ay sii daayeen Mdaxda Gaza,ayaa sheeegay in maamulka Masar ay maanta sii daynayaan dadka reer Falastiin ee ka soo laabanaya Xajka,kuna socda Marinka daanta galbeed iyo muwaadiniinta kale ee imaanaya.
Madaxada Masar illaa hadda ma shaacin in ay furayaan albaabka xadka ay la wadagaan Gaz a.
Taliyaha cusub ee Ciidanka Xoogga dalka oo kormeer shaqo ku tagay Cisbitaalka Xoogga dalka+Sawirro
Darajada S.Guuto oo loo xiray Gabadhii ugu horreysay oo Soomaali ah